Umthandazo woKhululwa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba ungayenza njani ifayile ye- umthandazo wokuhlangulwa ukukhokelela kubomi obupheleleyo noxolo kwaye ukhulule umoya kubukhoboka bokomoya obungendawo.
1 Kutheni kulungile ukuthandaza umthandazo wohlangulo?
2 Ngubani endifanele ndizinikezele kumthandazo wam wokuHanjiswa?
3 Umthandazo weNkululeko ku-Saint Michael iNgelosi enkulu
3.1 Umthandazo wokuhlangulwa ngeNdumiso 143: Domine exaudi
Kutheni kulungile ukuthandaza umthandazo wohlangulo?
Phakathi kwemithandazo, kukho eminye egcina injongo yokukhulula umoya kumakhamandela amabi okomoya awuthintelayo ekukhokeleni ubomi obupheleleyo nobuseluxolweni, umthandazo wenkululeko uvumela amanxeba apholisayo kunye nezifo ezibangelwa yinzondo kunye nentlungu.
Kukho amaxesha ebomini bethu apho induduzo efana nokuwola okanye ingcebiso ayonelanga ukuba sikwazi ukufumana olo xolo silufunayo ngamaxesha okuphelelwa lithemba, ke ngoko, siya kwindibano ekhethekileyo nentando yobuthixo, ke ngoko uMthandazo Ukoyisa obu bunzima kuluncedo kakhulu, kuba ukuba sizenza ngokuzinikela okukhulu sizinikele ekufumaneni uxolo ebesilulangazelela.
Kanye njengemithandazo yokuphilisa esiyisebenzisayo ngalo mizuzu xa siziva sibuthathaka yinto enzulu enjengokugula, siyazi ukuba singathembela kusindiso oluvela ezulwini. Xa uYesu wayesemhlabeni ngathi, wenza ukuphilisa okuninzi, kokubini umphefumlo kunye nomzimba kwaye ke umthandazo uhlala uyindlela yokunxibelelana noYesu kunye nokuphilisa asinike kona, kunye namaqela oMthandazo anikezela inkampani yokucela ukuphiliswa, kwaye bahamba nabantu kwinkqubo.
Umthandazo kufuneka wenziwe ngokholo olukhulu, ithemba kunye nokuthobela ngokupheleleyo ukuthanda kukaThixo, ngenxa yesi sizathu kufuneka sithandaze ngomphefumlo wethu uphindaphinde, kananjalo ukuba kunokwenzeka ukuthandazela konke loo mntu bafuna ukumphilisa, Kananjalo iluncedo njengendlela yokukhapha loo mntu ufuna ukukhulula, kunye nemithandazo yenkululeko usindiso lomphefumlo luyacelwa, kwaye ziyafezekiswa kwiindumiso zenkululeko okanye kwimithandazo eya kwiNgcwele uMikayeli iNgelosi enkulu.
Ngaphambi kokuqhubeka nokufunda, ndiyakumema ukuba ufunde: «Umthandazo wamaKatolika ». Ndiyazi ukuba ungayithanda.
Ngubani endifanele ndizinikezele kumthandazo wam wokuHanjiswa?
Ebhayibhileni, babhekisa kwimithandazo yenkululeko, ngenxa yeso sizathu izihlandlo ezininzi kukhankanyiwe ukuba uYesu unika ilizwi legunya lokukhulula imiphefumlo engcungcuthekiswa zizinto ezimbi, kwiindumiso siyaqonda ukuba iNkosi ifuna ukuzaliseka kwayo ukuba siphumelele kwinkululeko, kwaye kuza kusinceda ukuba sisuse oko kusithintelayo ukuba sikhululeke.
Imithandazo yenkululeko iluncedo kakhulu, ngakumbi kwezo meko sihamba kuzo apho siziva sinzima, sidimazekile okanye sidiniwe kakhulu, ngaphandle kokukwazi ukusombulula ingxaki esijamelene nayo, kungoko siyazibuza, ndifanele ndiye kubani? Ndingenza ntoni?
Ingelosi eyintloko inguMichael nguye ophetheyo ekukhuseleni thina kubo bonke ububi kwaye ubathintele ukuba bangasenzakalisi, nguye ozama ukususa zonke iingcinga ezimbi ezitsala iinjongo ezimbi. Kwimbali uyaziwa njengenkosi yomkhosi kaThixo.
Kwincwadi ye-Apocalypse sikhankanyiwe idabi apho ingcwele uMikayeli iNgelosi enkulu, yayiyintloko eyathatha izintso zomkhosi wasezulwini, ibulala inamba ehlasele iNtombikazi, ke ngoko, ibuza uMichael oyiNgcwele kwimithandazo yenkululeko Ingelosi enkulu ecela ukusikhulula kuyo yonke imikhosi yobubi. Xa ujongene nomzuzu wokuphelelwa lithemba, umsindo kwaye uziva ukuba uwela lithemba lokuthandaza ku-Saint Michael kukuba nengelosi enamandla elungileyo ecaleni kwakho kwaye uya kufumana iziphumo ezininzi ezifanelekileyo.
Umthandazo weNkululeko ku-Saint Michael iNgelosi enkulu
O nkosana ezukileyo, ehleli ecaleni koThixo wethu esimthandayo, sikhusele kubo bonke ububi nakubo bonke abafuna ukwenzakalisa, ndiyakucela, mkhuseli.
Nceda abantu abadalwe nguThixo ngokomfanekiselo wakhe, onqwenela kakhulu kwaye wabanika yonke into, ukuze ukwazi ukumkhusela kubungendawo bomtyholi nakuwo onke amandla akhe. INgcwele uMichael iNgelosi eNkulu, indlu enkulu yeNkosi ikubona inguwe wedwa okwaziyo ukukhusela itempile yayo enkulu kwaye, ukongeza, ukuba sisikhokelo semiphefumlo ekufuneka inyuke iipaseji zezulu, yiyo loo nto isisikhanyisi sayo esikhulu.
Sithandazela ukuba wena noThixo niyigcine idemon eyonakalisayo, afuna ukuyenza ngokuchasene nokuzola nokukhanya kwabathembekileyo bakaThixo.
Inkosana ezukileyo yasezulwini, thaca elowo umthandazo esiwenzayo apha ukuze ube ngumlamli phakathi koThixo nathi, ukuze ubawo wethu wasezulwini akhuphe umyalelo wokuba ohlwaye idemon efuna ukuphazamisa uxolo. Ndiyacela, ukuba ikrele lakho lingaze liphambuke kuthi.
Umthandazo wokuhlangulwa ngeNdumiso 143: Domine exaudi
«Nkosi, wuve umthandazo wam,
Wubazele indlebe umthandazo wam.
ndiphendule, ngokuthembeka kwakho, nobulungisa bakho.
Musa ukumbiza umkhonzi wakho,
kuba akukho namnye uhleliyo olilungisa phambi kwakho.
Utshaba lundisukela lwada lwafa,
ndibutyumle emhlabeni ubomi bam;
njengabafileyo beminyaka emininzi eyadlulayo.
Umphefumlo ucinyiwe ngaphakathi kum
Intliziyo yam iyasilela esifubeni sam.
Ndikhumbula amaxesha adlulileyo
Ndicamngca ngemisebenzi yakho yonke;
Ndiwubona umsebenzi wezandla zakho
kwaye ndolulela kuwe iingalo zam:
Ndiyagcuma njengelizwe elibharhileyo.
kuba ndiphelelwe ngumphefumlo.
Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum;
ukuze ndingabi njengabahla baye emhadini.
Ngamana ndingaluva uthando lwakho kusasa
kuba ndikholose ngawe;
ndibonise indlela emandiyilandele,
kuba kuwe ndiwuphakamisela umphefumlo wam.
Ndihlangule ezintshabeni zam,
Ngokuba ndizimela ngawe;
ndifundise ukwenza ukuthanda kwakho,
ngokuba unguThixo wam.
Ngamana umoya wakho wobubele ungandikhokela
ukunqumla umhlaba othe tyaba.
Ngenxa yegama lakho, Nkosi,
Wugcine umphefumlo wam.
Ngokobulungisa bakho ndisuse engxakini;
Tshabalalisa utshaba lwam ngenxa yokuthembeka kwakho.
Tshabalalisa abacinezeli bam,
ngokuba ndingumkhonzi wakho.